Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay bulshada Gaalkacyo. – TPEC
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay bulshada Gaalkacyo.
Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland ee TPEC oo weli ku guda jira Safaradoodi ay Bulshada ku wacyi-galinayaan ka qeyb qaadasha Doraashooyinka Dowladdaha hoose ee hal qof hal cod oo dhawan dhici doonta, ayaa Magaalada Galkacyo ee xarunta Gobolka Mudug kulan kula qatey Dhaliyaarada Haweenka Cuqaasha wax-garadka iyo Bulshada Qeybaheeda kala duwan.
Guddiga KMG ah ee Doorashooyina Puntland ayaa waxaa ugu horeyn Magaalada kusoo dhaweeyey maamulka Gobolka iyo Kaan Degmada, iyo Masuuliyin kala duwan waxaa ay Bulshada ay u soo bandhigeen Qorshe Hawleedka geeddi-socodka Dimuqaradiyeenta iyo Jadwalka Doorashada Dowladdaha Hoose ee Puntland shacabka ayaana su’aalo kala duwan weydiyey waxaana ka jawaabey Su’alaaha Sacabka Guddoomiyaha Guddiga iyo Xubno kamid ah Guddiga .
Guddoomiyaha Gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur ayaa ugu danbeenti ka hadlay kulaanka, Isaagoona shacabka reer Galkacyo ugu mahadceliyey sida wanaagsan ay ugu diyaarsan yihiin ka qeyb qadashada Doraashooyinka Hal qof iyo Hal cod ee dhici doonta.